मोटी केटीसँग बिहे गर्नुहोस ! यस्ता छन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको फाइदै फाइदा - चारदिशा
मोटी केटीसँग बिहे गर्नुहोस ! यस्ता छन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको फाइदै फाइदा
June 30, 2019 चारदिशा बिबिध
सामान्यतया स्लिम केटीहरु धेरै आर्कषक हुने मान्यता रहेको पनि छ । तर अहिले एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन भन्नुको अर्थ सजिलैं छाडेर जाँदैनन् ।
नेशनल अटोनान्मस यूनिवर्सिटी अफ मेक्सिकोंले गरेको अध्यनमा स्लिम केटीहरुको दाँजोमा मोटी केटीहरुसँग सम्बन्धमा रहेका पुरुषहरु धेरै खुःशी हुन्छन् । अध्यनमा भनिएको छ स्लिम केटीहरुको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा ज्यादा खुःशी रहन सक्छन । यस्ता महिलाहरु पुरुषलाई सिक्स प्याक लगायतका शाररीक रुपमा तनाब हुने खालका कामहरु गर्न दबाब दिदैंनन तर स्लिम केटीहरु यस्ता कुराहरुमा दबाब दिन्छन् ।
अध्यन यो पनि भन्छ कि मोटी महिलासँग सम्बन्धमा भएको केटा मानसिक रुपमा कहिल्लै तनाव नलिने प्रकृतिको हुन्छ । यर्सथ मोटी महिलाहरु श्रृंगार देखि लिएर अन्य विविध कुराहरुमा केटालाई दुःख दिने स्वभावका हुँदैनन् ।
यहाँ गरिएका कुराहरुमा हामीले केही परिमार्जन गरेका हौं तर दावा गरेका होईनौं । यो नितान्त अध्यनले देखाएको कुरा हो त्यसैले तपाईको प्रेम सम्बन्ध राम्रो बनाउन्को लागि सबै भन्दा पहिले एक अर्कालाई बुझ्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस् । यति भएको खण्डमा झण्डै सबै सम्बन्धहरु दिगो र टिकाउ हुन्छन् । अनि मात्र पताई र तपाईको जिन्दगी सुखमय हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
फेसबुक चलाउनुस्, डिप्रेसन भगाउनुस्